Farriimaha Agaasimaha - Drotrong Chinese Dhir Biotech Co., Ltd.
Asxaabta qaaliga ah,
Ku soo dhowow inaad booqato degelka Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. Waad ku mahadsan tahay dareenkaaga iyo taageeradaada. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku muujiyo salaan qaali ah adiga oo ku hadlaya magaca asxaabtayada.
Laga soo bilaabo 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. waxay ku hawlanayd dhisida silsilad warshadeed oo dhan oo ah geedo shiineys ah, oo ay kujiraan geedo Shiinaha ah, abuur, geeddi-socod asaasi ah, qoto-dheer, soo saarista dhirta iyo ganacsiga. waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa mabda'a "horumarinta ganacsiga, xaqiijinta iskaashiga guusha-u-guuleysiga, sameynta tabarucaadka bulshada iyo aadanaha". Waxaa naga go'an inaan horumarino warshadeena dawada geedaha Shiinaha oo leh cilmi, howlkarnimo, hal abuur iyo dabeecad adag.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan siinaynay alaab tayo sare leh warshadaha dawooyinka ee caanka ah, soosaarayaasha qurxinta, iyo warshadaha laga soo saaro dhirta ee gudaha iyo dibedda, waxaanan ku guuleysanay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisheena. Waan ognahay sida loo daboolo dalabaadka suuqa waxaanan kalsooni ku qabnaa inaan sameyn karno xal aad u fiican oo aan hubinno in xalalkeennu ay si buuxda u shaqeynayaan, si hufan u shaqeynayaan oo ay sii ahaanayaan kuwo jilicsan markasta.
25-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan mar walba qaadaynay mas'uuliyadeena bulshada. Tani waa doorashada lama huraanka ah si loo gaaro horumar waara. Waxaan si joogto ah u eryanaynaa alaab tayo sare leh, tikniyoolajiyad sare iyo karti xirfadeed. Muddada cusub, waxaan si firfircoon u sahamin doonnaa oo aan u beddeli doonnaa habka ganacsiga, sii wadnaa cusbooneysiinta iyo sameynta horumar aan ku xaqiijineyno horumar waara. Waxaan ku darsan doonaa tabarucyadeena horumarinta warshadaha dawooyinka iyo caafimaadka dadka.
Waxaan si kal iyo laab ah u rajaynayaa in macaamiisheena cusub iyo kuwii horeba, aan wadajir u abuurno mustaqbal wanaagsan!